Guriga - Aloha United Way 2-1-1
Allow United Way 211
Laga bilaabo "hello" si aad u caawiso. Waanu kuu daboolnay.
211 Khadka caawimada ee gobolka oo dhan ee Hawaii oo kugu xidhaya agabyada aad u baahan tahay.
Sideen ku caawin karnaa? Dooro habka ugu fiican adiga.
Markaad wacdo, cod toos ah ayaa dhinaca kale ah - diyaar u ah inuu ku caawiyo.
Mashiinka Raadinta onlaynka ah
Sheeko toos ah
Taageerada Cunnada ee Degdegga ah iyo Aan Degdegga ahayn ee La heli karo
Haddii aad u baahan tahay macluumaad iyo agab ama gargaar cunto oo degdeg ah, 211 Khadka Caawinta Khadkayaga ayaa diyaar u ah inay ku hagaan. Iyada oo ku saleysan baahiyahaaga iyo goobtaada, waxaan ku caawin karnaa agab aad isla markiiba ka faa'iidaysan karto. Wax dheeri ah baro
Waxaa qoray Carolyn Hyman Maarso 7, 2022
Waxaa qoray Carolyn Hyman Febraayo 28, 2022
Waxaa qoray Carolyn Hyman Febraayo 21, 2022
Khayraad Lagu Kalsoonyahay & Isku Xidhka Muhiimka ah
Khadka caawinta ee AUW's 211 waxa ay shaqaaleysiisaa shaqaale go'an si ay u hagaajiyaan una ilaaliyaan xogta iyo barnaamijyada. Waxaan nahay isha ugu wanaagsan uguna kalsoonida badan ilaha adeegga bulshada ee gobolka Hawai'i. Ku dar barnaamijyadaada iyo adeegyadaada maanta. Waxaan ka caawin doonaa inaan ku xidhno isticmaalayaasha 211 agabka ugu habboon juqraafiga iyo baahidooda.
Ku dar ama cusboonaysii wakaaladaha iyo barnaamijyada.
Codso agab xayaysiis
Aloha United Way's 211 khadka caawinta ee gobolka oo dhan waxa uu dadka ku xidhaa agabka ay rabaan waxana laga yaabaa in aanay garanayn inay u baahan yihiin. 211 Takhasusle ayaa loo tababbaray inay kaa caawiyaan helida cunto, hoy, kaalmo dhaqaale, daryeelka ilmaha, taageerada waalidnimada, daryeelka kupuna, adeegyada naafada, tababar shaqo iyo wax ka badan. Adeeggu waa bilaash waana qarsoodi. Xogta adeeggu waxay kaloo gacan ka geysataa hagaajinta siyaasadaha iyo agabka waxaana lagu heli karaa bilaash, kheyraad ahaan bulsho ahaan.
Wax ka baro Aloha United Way 2-1-1
Eeg Xogta Bulshada / 211 Tirinta